AASraw powder vatengesi product product | AASraw
Nokuda kwehutano hweAASraw, mutauro wedu we "Genius goods inogona kuonekwa" zvinoreva. Kune vane ruzivo steroidka vanobika kana pasi pasi varidzi vemabhiza, kubva pakuonekwa uye kunhuwa uye vamwewo vanhu venyama, vanogona kutaurira zvinhu zvinhu zvisinganzwisisiki kana kuti zvakaipa. Asi kubatsira kune mamwe maoko matsva, Zvose zvakasvibiswa kubva kuAASraw zvinotsigirwa zvekunatswa kwete pasi pe98%, zvizhinji zvezvinhu zvakachena 99%. Iko kune HPLC kuongorora mishumo uye COA sechinhu chinotsigira chechipikirwa chedu. Uye, tinokurudzira vatengi vatengi vatengi kuti vaedze poda yakasvibirira nevanoshanda mao Laboratories uye tinogona kubhadhara mari yakafanana.